I-Parsley | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ingabe i-parsley imifino noma cha?
Kunzima ukuthola umuntu ongafani ne-parsley. Njengomthetho, imifino ebabayo ihlotshaniswa nalesi gama ngokuqonda, kodwa noma yimuphi umama wendlu uyazi ukuthi impande yalesi sitshalo ayiyona into encane futhi iyigugu kunengxenye engenhla, ngakho-ke i-parsley ngezinye izikhathi ibizwa nangokuthi imifino, ngokuqondile, isivuno sempande. Iyini le masiko, yiziphi izici zesakhiwo saso, ukuthi zihluke kanjani kwezinye izinhlobo zemvelo - konke lokhu nezinye izinto eziningi kuzoxoxwa kulokhu kubuyekezwa.
Imithi yokwelashwa yomsuka ka-parsley nokusetshenziswa kwayo emithi yokwelapha
I-Parsley ingenye yamakhambi okuthandayo cishe wonke umama wendlu. Isikhathi sokuphumula singasiza ngokubili inyama nezitshalo zemifino, nezinhlanzi. Kodwa-ke, bambalwa abantu abazi izakhiwo ezizuzisayo zomsuka wotshani obomuncu, kanye nezindawo zokuphulukisa zezindlela ezihlukahlukene ezisekelwe kulo. Lesi sihloko sizobheka ngokuningiliziwe ukuthi izimpande ze-parsley zibukeka kanjani, ukuthi kuhle kangakanani empilweni, nokuthi uyipheka kanjani ngokufanele.
Izici zokusetshenziswa kwe-parsley njenge-diuretic
Izinzuzo kanye nokuphulukiswa kwezakhiwo ze-parsley kungenxa yezinto eziningi eziphilayo ezisebenzayo ezakha zonke izingxenye zesitshalo. Lesi sihloko sizinikezela emthonjeni wokudla, ophethe isitshalo esiphunga. Kungakhathaliseki ukuthi i-parsley iyi-Parsley ye-diuretic, okuyisinye sezidakamizwa ezidume kakhulu futhi ezidumile ezinamafutha ashisayo esetshenziselwa ukupheka emhlabeni jikelele ukucebisa ukudla ngama-spicy aphuzi kanye nokunambitheka okuthakazelisayo, futhi kuyinto ebonakalayo yokwelashwa.
Imithi yokwelapha ye-parsley ukumnika
I-parsley isetshenziselwa kabanzi njenge-seasoning izitsha ezihlukahlukene. Ama-infusions nama-teas aphuma kuwo angaletha izinzuzo ezinkulu emzimbeni. Uma ufunda ukuwuphuza ekhaya, ungajabulela isiphuzo esimnandi futhi uthole impatho yokuphulukisa. Funda kabanzi mayelana nokwehliswa kwe-parsley nesicelo sayo sizokhuluma ku-athikili.
Indlela yokutshala i-parsley ukukhula okusheshayo?
Cabanga nje ingadi ngaphandle kwe-parsley engenakwenzeka, ikhulile kokubili ekukhiqizeni imifino impande nemifino enomnandi, esetshenziselwa ukuthuthukisa ukunambitheka kwezitsha ezihlukahlukene. Indlela yokukhulisa ngempumelelo i-parsley efayeleni lakho lewindi noma engadini, indlela yokuqinisekisa ukuhluma okuhle nokushesha kwembewu, ungafunda kabanzi ngemininingwane eminingi.
Izici zokusetshenziswa kwe-ice parsley izimonyo ze-ice cubes
Wonke owesifazane amaphupho obuso obubushelelezi obuhle. Noma kunjalo, ufuna ukuchitha ekunakekeleni isikhathi esincane, kodwa ukuthola umphumela omkhulu. Kulokhu, usizo oluhle kakhulu lwezonyiso zokuzenzela ubuso. Okuthandwa kakhulu yi-ice cubes ezenziwe ngamanzi ahlanzekile kanye nokwengezwa kwamanye amakhambi.
Izindlela zokulwa nesifo se-parsley nezinambuzane
Yonke insimu ifuna ukuthola isivuno esihle futhi esiphezulu, kodwa hhayi ngaso sonke isikhathi. Ngokuvamile imifino ihlaselwa yizinambuzane noma isifo. Isitshalo sibhekene nalezi zinkinga, ngakho-ke kudingeka udlule izimbangela zezinkinga zensimu futhi ukwazi ukuthatha izinyathelo zokuzixazulula.
Indlela yokusebenzisa i-parsley ekwelapheni i-edema
I-parsley yensimu engokwesiko ayiyona nje isipayisi noma umhlinzeki wamavithamini nama-microelements. Kungasiza ngesenzakalo esinjalo esingathandeki njenge-edema. Le ndawo isetshenziselwa imithi yendabuko. Sifunda ukuthi i-parsley iyasiza kanjani uma ukuvuvukala, yiziphi izinkampani ezibhekene nokusetshenziswa kwayo, ukuphatha ukuvuvukala emilenzeni, ukusebenzisa.
Indlela yokuqeda ukukhulelwa nge-parsley ezinkathini zokuqala
Ezinye izitshalo zingase ziqalwe ukukhulelwa kwe-uterine nokulahlwa kwesisu. Iparsley ibhekwa njengenye yalezi zitshalo. Umbuzo wokuthi lokhu kuyiqiniso nokuthi ngabe kungenzeka yini ukukhipha isisu ngosizo lwawo kuphendulwa kulesi sihloko. Indlela i-parsley ithinta ngayo umzimba wesifazane ngesikhathi sokukhulelwa Abesifazane, ikakhulukazi abasha, bakhetha izindlela zemvelo zokukhipha isisu.
Izici zokutshala i-parsley ensimini evulekile ekhaya
Ensimini ngayinye futhi indlu encane yanikeza isakhiwo sezinto eziphilayo, kufaka phakathi iparsley. Kuyinto isithako esibalulekile samasaladi amasha, agcinwe, izifundo zokuqala nezesibili. Ukuze ukhule izihlahla ezihlaza eziluhlaza ensimini, udinga ukunakekela kahle. Indlela yokwenza lokhu ichazwe kulesi sihloko.
Izakhiwo eziwusizo nezindlela zokusebenzisa imbewu ka-parsley
Ngisho namaGreki asendulo ayesazi izindawo zokuphulukisa ze-parsley, futhi namuhla loluhlaza luvame ezindaweni ezihlukahlukene zemithi yendabuko. Kodwa udumo olunjalo alutholanga imbewu yalesi sitshalo, ngokuvamile elahliwe noma iya kudla izinkomo. Futhi ngeze, ngoba ekubunjweni bayalingana namaqabunga avuthiwe.
Izici ze-parsley ukusheshisa njalo ngenyanga
Umzimba wesifazane ngamunye ungumuntu ngamunye, ngakho-ke umjikelezo wanyanga zonke kwabanye awulondekile. Ngenyanga eyodwa, ukuya esikhathini kungase kuqale ngemuva kwezinsuku ezingu-24, futhi kwenye, ngemva kwezinsuku ezingu-30. Umehluko emjikelezweni futhi, ngokufanele, ukubambezeleka kokuya esikhathini kwezinsuku ezingu-2-6 kuthathwa njengokujwayelekile. Kodwa zikhona izimo lapho abesifazane bezama ukushayela inyanga zonke nganoma iyiphi indlela futhi bayasheshise ukufika kwabo.